QOSOLKA EE XILLIGA QABOOBAHA: SIDA LOO ILAALIYO, SIDA LOO QUUDIYO KAREEMKA, WAXA FITAMIINADA SI AY U SIIYAAN - BEERAHA DIGAAGA
Mawduuca ee xamaamka ee xilliga qaboobaha: daryeelka iyo quudinta
Milkiilaha kasta, oo ku hawlan dayactirka iyo taranta ee xamaamyada, waxaa la kulantaa dhibaatooyin soo noqnoqda xilliga qaboobaha. Xitaa haddii shakhsiyaadka aysan ka tirsaneyn noocyada awoodda leh, diyaarinta hordhaca ah, iyo sidoo kale daryeel dheeraad ah, ayaa si fudud lagama maarmaan u ah. Next, waxaan tixgelineynaa shuruudaha qolka xilliga qaboobaha, u sheeg oo ku saabsan daryeelka iyo cunto ee xamaam xilliga dhaxan daran.
Shuruudaha loogu talagalay qashinka
Ka hor intaanay bilaabmin cimilada qaboobaha, waa in daryeel la qaado si loo abuuro degaan raaxo leh oo laga helo dovecote, si looga fogaado maqnaanshaha difaaca iyo muuqaalka hargabka.
Shimbiruhu kama mid aha shimbiraha ba'an, kuwaas oo u baahan inay bixiyaan xaaladaha guryaha "kuleyl" ee xilliga jiilaalka, laakiin noocyada madaxtooyada sidoo kale uma dulqaadan karaan dhir daran. Heerkulka ugu hooseeya ee xamaamadu u xanuunsanyihiin waa -7 ° C. Haddii qolku noqdo mid daalan, markaa waxaad u baahan tahay inaad kordhiso qaadashada kalooriga ama aad siiso kuleyl dheeraad ah.
Heerkulka hawada lihi ma aha dhibaato halis ah, laakiin qabowgu sidoo kale wuxuu qaboojiyaa quudinta iyo biyaha. Haddii xajmigu uu ilaaliyo shimbiraha hawada qabow, ka dibna haddii cuntada la qaboojiyay ama dareeraha qabowgu ku dhaco jidhka, hypothermia looma diidi karo.
Ma taqaanaa? Qaadiintu waxay la kulmaan labadooda ka hor intaanay dhicin, ka dib oo ay sii wadaan kalsoonidooda oo dhan noloshooda. Sababtaas awgeed waa in jajabyada ay marwalba u iibsadaan xamaamyada laba-geesoodka ah si aysan u xanuunsaneyn iyagoon lahayn qeybta labaad.
Waa inaan sidoo kale ka taxadarnaa rinjiga:
waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo dhamaan dillaacyada;
haddii ay suurtogal tahay, rakibi dariishado dijitaal ah oo labajibaaran oo u ogolaanaya inaad diirimaad joogto ah;
waxaa lagula talinayaa in lagu xiro derbiyada leh qalabka kuleylka kulul (polystyrene, qalalan). Sidaa darteed in xamaamyada ma aysan dhejin karayn, waxay ku dhejiyeen xargaha / fareeshka;
Daryeelka waa in la qaato si loo daboolo saqafka, kaas oo lagu garaaci karo qalab isku mid ah.
Xilliga xagaaga, waxaad heli kartaa iftiinka qorraxda, laakiin xilliga qaboobaha saacadaha iftiinka ayaa la yareeyaa, sidaas darteed waxaa jira baahi loo qabo iftiin dheeraad ah. Nalalka caadiga ah ee loo isticmaalo nalalka. Ilaha waa inaanay xoog badan yihiin, markaa waxaad samayn kartaa 1-2 nalalka 50 watts. Waxaa lagu talinayaa in si qarsoodi ah loo kordhiyo saacadaha iftiinka saacadaha 12 ilaa 13 saacadood si shimbirku u seexdo inta lagu jiro quudinta habeenkii.
Waa muhiim! Inta lagu jiro cimilada qaboobaha, saacadaha iftiinka maalinta ayaa la kordhin karaa ilaa 14-15 saacadood, iyo sidoo kale soo bandhigid cunto dheeraad ah.
Si loo hubiyo beddelidda caadiga ah ee hawada waxaa lagu rakibay laba tubo - bixinta iyo qiiqa. Midka koowaad ayaa lagu rakibay saqafka, iyo labaad ee height of 15 cm dhulka. Xilliga qaboobaha, hawo-qaadashada dovecote waa dhibaato, sababtoo ah waxay abuurtaa khatarta hypothermia. Sababtaa awgeed, furayaasha albaabka waxaa lagu rakibay tuubooyinka qaaca iyo qiiqa, taas oo qayb ahaan ka soo horjeeda hawada iyo gagaarka hawada. Sidaa darteed, waxaa suuragal ah ma aha in laga reebo muuqaalka muuqaalka qabyada, laakiin sidoo kale si weyn u kordhin heerkulka qolka.
Xilliga qaboobaha, jeermisku wuxuu noqonayaa imtixaanka dhabta ah, gaar ahaan haddii heerkulka ka baxsan daaqada uu hoos u dhaco heerarka muhiimka ah. Diidmada inaad nadiifiso qolka ma'aha suurtagal, sidaas darteed waa qasab in bishii mar la dhammeeyo si loo dhameeyo nadiifinta guriga roodhida adoo isticmaalaya kiimikada jeermiska. Waqtiga shimbirta waxaa loo guuriyaa meel raaxo leh oo leh heerkul isku mid ah.
Sidoo kale akhri sidoo kale sida loo quudiyo kareemka, sida loo dhiso dovecote iyo sida loola dhaqmo xamaam.
Nadiifinta waxaa loo fuliyaa sida soo socota:
habka nadiifinta waa in loola dhaqmo dhamaanba meelaha gudaha ku jira, oo ay ku jiraan saqafka;
naas-nuujiyeyaasha iyo cabitaanada ayaa horay looga saaray;
qalabka loo isticmaalo in lagu xanaaneeyo xayawaanka waa in sidoo kale la nadiifiyaa, la farsameeyo;
inta lagu jiro dhaxan daran, biyaha kulul waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo kiimikada;
doorbididda waxaa la siiyaa daawooyinka si dhakhso ah u qalajinaya, waxayna sidoo kale awood u leeyihiin in ay burburiyaan jeermiska khatarta ah ee heerkul-hoosaadka.
Waa muhiim! Waa mamnuuc inay shimbirta ku soo celiso dovecote ilaa inta xal daawada jeermisku ay gebi ahaan qalalan yihiin.
Waxa aad ku quudinaysid xamaamka xilliga jiilaalka
Cuntada xilliga qaboobaha waxaa lagu gartaa kalooriyada oo kordhay, maadaama ay shimbirta u baahan tahay in ay tamar u isticmaasho jirkeeda. Sidoo kale jiilaalka ma jiraan noocyo badan oo quudin, iyo baahida loo qabo fitamiinada iyo macdanta ayaa kordhay oo kaliya, markaa waxaad u baahan tahay inaad si habboon u sameyso liiska.
Ka hubi liistada hilibka ugu badan ee hilibka.
Waxyaabaha kale ee lagu daro (tiro yar):
lime la jajabiyey;
Waa muhiim! Xannibaadda waxay bixisaa ciid webiga iyo chips.
Laguma talinayo in la bixiyo xilliga qaboobaha:
Waa mamnuuc in la bixiyo:
caddaan, cawl, madoow madow;
hilibka iyo hilibka;
cuntooyinka ay ku jiraan sonkorta, dhadhanka, midabada, milixda;
dufan (subag, subag iyo saliid qorrax leh, labeen dhanaan).
Maxay tahay fitamiinada ay bixiso
Haddii aysan jirin wax suurtagal ah in la kala saaro cuntada cunta khudradda iyo miraha, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato suun qaas ah oo ka caawiya shimbiraha in ay ka badbaadaan jiilaalka, iyo sidoo kale "kasban" yaraanta fiitamiin guga hore. Vitamiin lagama maarmaanka u ah waxqabadyada caadiga ah ee caadiga ah: A, E, D, K, C. Ogsoonow inay jirto arrin vitamiin ah oo loogu talagalay iibka, kuwaas oo lagu iibiyo foomka la heli karo ee xamaamka.
Haddii aanay suurtagal ahayn in la iibsado nooca warshadaha, ka dibna xusuusnow in fitamiinada kor ku xusan, marka laga reebo ascorbic acid, waa baruurta xalka, siday u kala horreeyaan, waxay ku nuugaan oo keliya dufanka, ka dibna waxay ku urursan yihiin unugyada adipose iyo beerka. Dhibaatooyinka fitamiinada ee kooxda B, sida caadiga ah, ma dhicin, maadaama ay ku jiraan hadhuudhka, taas oo ka adkaata cuntada xilliga qaboobaha ee shimbiraha. Faytamiin C waxay la socotaa khudaarta cagaaran. Maamul dheeraad ah ayaa lagama maarmaanka u ah kaliya haddii hoos loo dhigo difaaca jirka. Faytamiin C waa biyo-qoyan, sidaa daraadeed waxay si dhakhso ah u gashaa dhiigga waxaana sidoo kale si dhakhso ah u baaba'ay jirka. Xawaaladaha lama abuuro xitaa marka la dheereeyo, sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo ilaaliyo heerka.
Sidee loo nadiifiyaa qoollada jiilaalka
Xusuusnow in bixinta xamaamka ee barafka jiilaalka ama biyaha dhaadheer waa la mamnuucay. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay keenaan hypothermia daran, taas oo ah sababta shimbirta ay u xanuunsan doonto ugu wacan waxayna u dhiman doontaa ugu xun. Tani waxay khusaysaa ma aha oo kaliya jilicsanaanta, laakiin sidoo kale xamaamyadu waxay caadaysteen in ay dhaxan daran.
Ma taqaanaa? Qarnigii XYII, dharka xaydha ayaa loo isticmaalay in laga soo saaro amooniyam, oo ah qayb ka mid ah qoryaha. Waqtigaas, Boqortooyada Ingiriisku waxay soo saartay amar ah sida qashin ee dhammaan xayawaanka dalka ku yaala ay ka tirsan yihiin dawladda.
Waxaa jira saddex siyaabood oo lagu xallinayo dhibaatada:
2-3 saacadoodba mar si aad u beddesho biyaha kuleylka.
Ku rakib cabitaan khamri oo gaar ah.
Dhowr jeer maalintii, ku shub qadar yar oo biyo ah oo ku dheji xayawaanka, kaas oo sii socon doona qoolooga nus saac.
Haddii dovecote si fiican loo daboolo, iyo heerkulka dibedda daaqada ma hoos u dhaco -20 ° C, ka dibna waa inaadan walwal gelin hypothermia. Waxaa muhiim ah in la xusuusto in heerkulka dareeraha uusan hoos u dhicin wax ka hooseeya +8 ° C.
Maaha lagama maarmaan in la aqoonsado shimbiraha lagu haysto walaalahooda duurjoogta ah. Caleemaha Magaalada waxay ku nool yihiin 3 jeer, waxayna badanaa ku dhacaan cuduro kala duwan. Sidaa darteed, xilliga jiilaalka, samee xaaladaha ugu haboon ee shimbirahaaga, si ay u sii wadaan inay ku siiyaan dareenka wanaagsan.
Video: taranta kJeelka ee jiilaalka